အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: စွယ်တော်ပန်းသုပ် စားရအောင်...
26 Responses to “စွယ်တော်ပန်းသုပ် စားရအောင်...”
စွယ်တော်ရွက်နုဟင်းချိုတော့သောက်ဖူးတယ်အစ်မ..။ အဲဒီလို အပွင့်လေး သုတ်ထားတာတော့မစားဖူးဘူး.။ အောက်က အစပ်သုတ်လေး စားချင်တယ်.။း).။မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်မှ သုပ်ကျွေးခိုင်းဦးမယ်.။
အခုမှ စွယ်တော်ရွက်၊ စွယ်တော်ပွင့်တွေ ဟင်းလုပ်စားလို့ရမှန်း သိတယ်။ ဒီလိုမှန်းသိရင် မြန်မာမှာ ရှိစဉ်က ခြံဝင်းထဲ အများကြီးဘဲ စွယ်တော်ပင်တွေ။ ဟင်းလုပ်စားရကောင်းမှန်း မသိခဲ့ဘူး။ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ရင်တော့ အမချော နည်းလေးတွေသုံးပြီး ဟင်းလုပ်စားကြည့်ဦးမှဘဲ။
အဲ့လို စားလို့ရမယ်မှန်း အသိဘူး။
စွယ်တော်ရွက်ဆိုရင် စာအုပ်ကြားထဲပဲ ညှပ်သိမ်းထားဘူးတာ..။
အဲ့လို စားလို့ရမှန်း အခုမှ သိတယ်ချောရေ...
တစ်ရက်လောက် လုပ်ကျွေးပါလားဟင်... :)
တစ်ခါမှ စွယ်တော်ရွက် ဟင်းချိုနဲ့ စွယ်တော်ပန်းသုပ် မစားဖူး ခရမ်ချဉ်သီးနဲ့ သုပ်တဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးကို ပိုသဘောကျတယ်..
စွယ်တော်ရွက်နဲ့ အပွင့်က စားလို့ရမှန်း ခုမှဘဲသိတယ်
i wanna eat :D
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့မြို့လေးကို ကျွန်းတောအုပ်နဲ့ဖြစ်ရမယ်တဲ့...။ နောက်တော့....
စွယ်တော် မြို့တော်ဆိုပြီး စွယ်တော်တွေ စိုက်လိုက်တာ...။
နောက်ဆုံးတော့ စွယ်တော်တွေကို ခုတ်ပြီး.. ဆီထွက်တယ်ဆိုတဲ့ အပင်တွေ စိုက်ပါရောလား..။
စွယ်တော်ပင်ဆိုတာနဲ့ ဒီအတွေးက ၀င်ဝင်လာတယ်.. မချောရာ.. :P
သြော်.. စွယ်တော်နဲ့သူများတွေ romantic ဆန်ဆန်လေးပြောချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့မချောက စားဖို့ချောင်းနေတာကိုး.. :P.. အခုမှ ကြားဖူးတယ်.. စားလို့ရမှန်း..း))
အဲ့ဒီလို တောစာတောင်စာတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ.. အခုလို အမှတ်တရ တင်ပေးတဲ့ မချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ပုံလေးနဲ့ပဲ ဖြေသိမ့်သွားပါတယ်.. :)
ဟန်ဂါဂိမ်းကို ကြည့်ချင်နေတာ.. တေလာဆွဖ်ရဲ့ အမ်တီဗီ ထွက်ကတည်းက ဘာကားဖြစ်မလဲဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားနေတာ.. မြန်မာပြည်မှာတင်မှ သွားကြည့်ဦးမယ်..
ဟို အ နှစ်လုံးနဲ့ အဆိုတော်က ပါချီပါချဲ့ပါ.. ကေပေါ့ပ်လိုလို တရုတ်လိုလိုနဲ့ သူ့သီချင်းတွေကို နားကို မထောင်ဖူးဘူး.. ကန်ဒီပြောလိုက်တော့ ပိုပြီး နားမထောင်ချင်တော့ဘူး.. အနုပညာအရည်အသွေး တက်အောင်တော့ မကြိုးစားကြဘူး.. မဟုတ်တာတွေတော့ လိုက်တု နေကြတယ်.. ဒီလိုလူမျိုးတွေ များလာရင် မြန်မာအဆိုတော်စစ်စစ်ဆိုတာ ပြတိုက်ထဲမှာ သွားကြည့်ရမယ်
တစ်ခါမှမစားဘူးဘူး ပြန်ရောက်မှ လုပ်စားကြည့်တော့မယ် မကြီးချောရေ......ကောင်းမဲ့ပုံဘဲ.....ကျေးဇူးပါ
မချောဆီမှာ ဒီလိုမျိုး ထူးထူးဆန်းဆန်း ဟင်းတွေလည်း တွေ့ရတာ မိုက်တယ်..၊ အမေသုပ်လေ့ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စွယ်တော်ပွင့် အချဉ်၊ အစပ်သုပ်ကို သွားရည် ကျသွားတယ်ဗျ..၊
စွယ်တော်ရွက်ကို ဟင်းချိုချက်သောက်လို့ ရတာ အခုတော့ သိသွားပြီ၊ ဆယ်တန်းတုန်းက စာအုပ်တွေ ကြားထဲမှာ ညှပ်ထားခဲ့တဲ့ စွယ်တော်ရွက်တွေ ပြန်လိုက် ရှာဦးမှပါ...။း)
ဟင်းချို ကြိုက်တဲ.သူဆိုတော. ဟင်းချိုနှစ်ခွက်ကိုကြည်.ပီး ဂလုသွားတယ်။
ခုညစာမစားရသေးခင် ကြည်.မိလိုက်တာ ပိုဆာသွားပီ။
အဲ့လို လုပ်စားလို့ ၇တယ်ဆိုတာ
ခုမှ ကြားဖူးတယ် ..
ပုံတွေ ကြည့်ပြီး အသုပ်တွေ စားချင်တယ် ..း))
ရာသီဥတု အေးအေးနဲ့ သောက်မယ်ဆိုရင် ရှယ်ပဲ ..း))
ထူးဆန်းတာာ စားချင်ရင် မချောဆီသွားလို့ ညွန်ရမလိုး) ဟိ
အိမ်မက်တော့ တခါမှ မစားဖူးဘူး..ရယ်
သုတ်စားလို့ရမှန်းလဲ ခုမှသိတယ်ရော ..း)
i miss these food. Mom used Swai taw phu (flower bud) in stead of flowers. For the soup, she made more sort for main-land style, with dried shrimp and some garlic in there..
ဒေါ်ချောပြောမှပဲ အနှီဟာတွေ စားလို့ရမှန်း သိတော့တာပဲ...ဦးဟန်ကြည်တို့ အညာသားတွေကျတော့လည်း စားဖူးနေကျလေးတွေပဲ လှည့်ပတ်ချက်စား သုပ်စားဖြစ်တာကလား...ထူးထူးဆန်းဆန်းများဆိုရင် လျှာပေါ်တင်ရမှာကိုက ခပ်ရွံ့ရွံ့ရယ်...
တစ်ခါလောက်မှ ဒေါ်ချောရဲ့ ထူးခြားဆန်းပြား စားဖွယ်များကို အိမ်ရှင်မကို ပြပြီး ချက်ကြွေးခိုင်းရမယ်...
စွယ်တော်ပန်းသုပ်၊ ဟင်းချို ခုမှ ကြားဖူးတယ်..စားကောင်းမယ့်ပုံ...